Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > အာဘော်နှင့်အမြင် > ဆောင်းပါး
ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၅ နာရီ ၀၁ မိနစ်	အဏ္ဏဝါစိုးမိုး	ကျွန်တော် အသက်ငယ်ငယ်က ကြားခဲ့ရတာဆိုတော့ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ခြောက်ဆယ်လောက်ကဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ ...
ကွယ်ပျောက်လို့သွား အစိမ်းရောင်ရပ်ဝန်းများ	အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ ၁၈ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၄၄ မိနစ်	ဆူးငှက်	''ပူလိုက်တာ ပူလိုက်တာ''တဲ့။ ဟုတ်သည်။ တော်တော်ပူသည်။ နံနက် ၅ နာရီဆိုသောအချိန်သည် အလွန်စောသော အချိန်ဖြစ်သော်လည်း၊ နေက ထန်းတစ်ဖျားမကရောက်နေပြီဟု ...
ဆင်းရဲတော့မှ ချမ်းသာတော့သည်	တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ ၁၇ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၀၂ မိနစ်	အဏ္ဏဝါစိုးမိုး	မြန်မာနိုင်ငံမှာ သဘောင်္သားဆိုတာ အခြေခံ လူတန်းစားတွေထဲမှာတော့ စားနိုင်၊ သောက်နိုင်၊ သုံးနိုင်၊ ဖြုန်းနိုင်၊ ကိုယ်ပိုင်ကား စီးနိုင်သူဖြစ်လို့ ...
နေတတ်ရင် သီချင်းကလေးနဲ့	သောကြာနေ့၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၀၇ နာရီ ၃၆ မိနစ်	ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်း	လူတစ်ကိုယ် စရိုက်တစ်မျိုးလို့ ဆိုသလိုပဲဗျ။ ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်းရဲ့ မိတ်ဆွေကြီး သပွတ်အူကျေးရွာကရွှေပွတ်စိုးမြင့် ဆိုတဲ့ လူကြီးဟာ ဘယ့်နှယ်စရိုက်မှန်း ...
အိမ်	ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ ၁၃ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၀၈ နာရီ ၅၂ မိနစ်	နေနွယ်	မြေသားပေါ်တွင် သစ်သားဖြင့် ဆောက်ထားပါသည်။ အမိုးအကာအခင်းတို့၏ ထုသွင်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ တူ၊ လွှ၊ ရွေဘော်၊ ဆောက်၊ ချိန်သီး၊ ကျင်တွယ်တို့နှင့် ...
အနုပညာမာနနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဂါရဝ	ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ ၁၃ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၀၆ နာရီ ၅၈ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း စာရေးဆရာ၊ အယ်ဒီတာကွယ်လွန်တာ ဆယ်နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ် အလှူပွဲလုပ်လို့ သူ့မိသားစုက ကျွန်တော့်ကိုဖိတ်သည် ...
နောင်ခါလာ နောင်ခါဈေး သဘောထား	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၀၆ နာရီ ၁၆ မိနစ်	သစ္စာနီ	ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ခရီးသွားရတာ အဆင်မပြေဖြစ်နေတာ ကြာပြီ။ အရင်က ကားနဲ့ လူမမျှ။ ကားကနည်း လူကများ။ အမြဲတမ်း ကားတွေက ကျပ်၍နေသည် ...
တြိ ပါဝါအားဖြင့် လျှောက်လှမ်းရဖွယ့် ခရီး	အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၀၉ နာရီ ၁၀ မိနစ်	ကေဇဝင်း	လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်က မြန်မာသူငယ်ချင်းများနေ့ ဝဘ်ဆိုဒ် (friendsdaygroup.ning.com) မှာဆောင်းပါး အနည်းငယ် ရေးခဲ့ဖူးပါတယ် ...
ဒီမိုကရေစီ အသိနှင့်အရှိ	တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၀၇ နာရီ ၅၃ မိနစ်	သစ္စာနီ	၁၉၆၂ ကစ၍ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီစနစ် တစ်ခန်းရပ်ခဲ့သည်။ ဗဟိုဦးစီးချုပ်ကိုင်မှု (TOTALITAR IANISM) အနှစ် ငါးဆယ်နီးပါး ...
အင်အားကောင်း နှစ်ပါတီစနစ်ကို မဖြစ်ညစ်ကျယ် ပီအာနဲ့ အစားထိုးမလား	ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ ၀၆ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၅၆ မိနစ်	ဦးကြည်မြင့် (လသာ)	သန့်ရှင်းသောအစိုးရ၊ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးဆိုသည်များမှာ အပေါ်ယံမဲဆွယ် စကားများသာ ဖြစ်နေပါသည်။ အပေါ်ကတော့ ပြောင်းလဲပါရဲ့ အောက်ခြေက ...
« ရှေ့ဆုံးမျက်နှာသို့ ရှေ့တမျက်နှာသို့ 1234567 8910 နောက်တမျက်နှာသို့ နောက်ဆုံးမျက်နှာသို့ »	စာမျက်နှာ 1 စုစုပေါင်း 64	ကြော်ငြာ
အမျိုးသမီးတို့၏ အခွင့်အရေးနှင့် မျိုးစောင့် ဥပဒေ ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ
We have 182 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved